Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. अतिक्रमित वनलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न सफल – Emountain TV
बारा, ३ साउन । डिभिजन वन कार्यालय बारा, सिमरा ४० हेक्टर अतिक्रमित वनलाई पुनः वन क्षेत्र मैं कायम गर्न सफल भएको छ । मुलुकमा राजनैतिक अस्थितरता भएको बेलामा भएका अतिक्रमित वन क्षेत्रको अध्ययन अवलोकन गरी सरकारको नीति अनुरुप अभियान अगाडी बढाएपछि यो सफलता मिलेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा करिव ४० हेक्टर वनको अतिक्रमण हटाई वन क्षेत्र कायम गर्न डिभिजन वन कार्यालय बारा, सिमरा सफल भएकोे छ । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २२ चकरीमा ७.५ कोल्हवी नगरपालिकाको मधुवनमा पाँच र बोधवनमा २७ हेक्टर वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई कार्यालयले कतिपय स्थानमा बृक्षरोपण समेत गरिसकेको छ ।
अतिक्रमणकारीहरुलाई हटाउन डिभिजन कार्यालय सिमराले नयाँ रणनितिका साथ अगाडी बढेको छ । पहिला जस्तो प्रहरी प्रशासनको बल प्रयोग नगरी समुदायका अगुवा, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र विभिन्न सरोकारवालाको समुहसँग अन्तरक्रिया गर्दै वन , डिभिजन वन कार्यालयको मात्र नभै हामी र हाम्रो समुदायको लागि हो , भन्ने बुझाउँदै अतिक्रमण फिर्ता गराईएको हो । वन अतिक्रमण हटाउन सिंङ्गो डिभिजन वन कार्यालय मात्र नभई सबै जनाको साथ र सहयोगले सम्भव भएको डिभिजन वन कार्यालय बारा सिमराका प्रमुख मन्जुर अहमतले बताउनु भयो ।
अतिक्रमित जमिनमा बृक्षरोपण गर्नदेखि विरुवाको रेखदेख र संरक्षण गर्न स्थानीय समुदायलाई जिम्मा लगाईएको छ । अतिक्रमित बनलाई पुनः वन क्षेत्रमा कायमगरी बिधी र प्रक्रिया मिलाएर समुदायलाई नै हस्तारण भएकोमा स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
कुल ४५ हजार हेक्टर भू–भाग ओगटेको बाराको जंगल अहिले खुम्चिएर ३१ हजार हेक्टरमा सिमित भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । कतिपय बाराको जंगल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना फास्ट ट्रयाक, दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले समेत ओगटेको छ । पछिल्लो पाँच वर्ष यता बारामा संस्थागत र अन्य गरी ११.६४ हेक्टर जंगल अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यति हुँदा हुँदै पनि समग्र मुलुकको जंगलको अवस्था भने ३९.७ प्रतिशतबाट बढेर ४४.६ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।